Machining lathe CNC mora vidy, Sina, Orinasa, mpanamboatra ary mpamatsy - Dongguan FUYA METAL & Products Plastika Co., Ltd.
Home > Products > Machining CNC > Machining lathe CNC
Ny milina latina CNC dia karazana milina teknolojia avo lenta amin'ny faritra misy ny fametrahana mazava tsara. Afaka manamboatra karazana fitaovana isan-karazany, misy 316, 304 vy vy, vy karbonina, vy firaka, aliminioma firaka, firaka zinc, firaka titanium, varahina, vy, plastika, acrylic, POM, UHWM ary akora hafa, azo zahana ho toradroa, boribory mitambatra ampahany sarotra rafitra.
Ny orinasa Machining lathe CNC dia manana kalitao avo, tsara laza ary serivisy mieritreritra ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany. Miaraka amin'ny vidiny mora dia hahazo Machining lathe CNC serivisy sy serivisy tena tsara ianao. Miaraka amin'ny "kalitao tena tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002 ~